‘कसैलाई मार नपरोस् भनेर सार्वजनिक यातायात स्वेच्छिक सञ्चालनमा ल्याइएको हो’ « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: ३० असार २०७७, मंगलवार १६:२१
फिदिम । सरकारले असार २६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र अन्य बाहिरी जिल्लाहरुमा आन्तरिकरुपमा सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय सुनायो । तर, यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सवारी चलाउन इन्कार गरे । सरकारले सार्वजनिक सवारीमा आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने नियम बनाएको छ । साविककोभन्दा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन सक्ने पनि भनेको छ । तर, व्यवसायीहरु साढे ३ महिनादेखि थन्किएको सवारी साधन बाहिर निकाल्ने वातावरण नभएको भन्दै गाडी लिएर सडकमा निस्कन मानेका छैनन् । सरकार र व्यवसायीबीचको मतभेदको कोपभाजनमा जनता परेका छन् । आखिर, सरकारले गाडी चलाउनोस् भन्दा पनि यातायात व्यवसायीले मानेनन, अब सरकारले के गर्छ ? यस विषयमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सार्वजनिक सवारी नचल्दा मान्छेले सकडमा धेरै दुःख पनि पाएका छन् । यातायात व्यवसायीको मागबमोजिम सरकारले सार्वजनिक यातायात त खोल्यो, तर अझै पनि जनताले सेवा पाएनन् । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन किन नसकेको ?
म अस्ति पनि दिनभर व्यवसायी साथीहरुसँग बसेँ । हिजो पनि दिनभर यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल भयो । पहिलो कुरा त उहाँहरुलाई स्पष्ट गरिएको छ । यो कुनै आन्दोलन हैन, कुनै माग राखेर व्यवसायीले सवारी बन्द गरेका पनि हैनन् । त्यसैले यसमा सरकार र उहाँहरुबीच छलफल भएर सहमति गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।
यो विषय विश्वव्यापीरुपमा आएको कोरोना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको कावु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर)ले निम्त्याएको हो । यसको दोषी केही पनि छैन । महामारीका कारण उत्पन्न समस्याबारे व्यवसायीलाई स्पष्ट हुन भनेका छौं ।
यो महामारीले ३ करोड नेपालीलाई कुनै न कुनै रुपमा आक्रान्त पा¥यो । धेरै व्यवसायी साथीहरुलाई पनि समस्या परेकै हो । उद्योग, धन्दा, कलकारखाना व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकै हुन् । सरकार अझै पनि यो समस्यासँग जुध्दैछ ।
अहिले सबैखालका सेवाग्राहीलाई पनि महामारीका कारण समस्या परेको हो । हामीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई क्रमैसँग जोखिमको अवस्था हेरेर सहज बनाउँदै लगेका थियौं ।
अहिले धेरै क्षेत्र सहज हुँदै गएका छन् । दुई वटा क्षेत्रमा अली बढी समस्या रह्यो, विद्यालयहरु र सार्वजनिक यातायात । यीनिहरु सार्वजनिक रुपमा भेला भएर सेवा लिने स्थान हुन् । संक्रमण फैलिने जोखिम हुने भएकाले सरकारले यी दुई क्षेत्रबारे ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन ।
तर प्रश्न उठिरहे । यातायात व्यवसाय गर्नेहरुले समस्यामा परेको कुरा हामीसँग बारम्बार भन्नुभयो । यहाँ काम गर्ने १०औं लाख मजदुर काम विहिन भए । उनीहरु रोजगारविहीन भए । व्यवसायीहरुले नै पटक–पटक यातायात सञ्चालनको माग गर्नुभयो । हामीसँग निवेदनहरु आए ।
त्यसकै आधारमा हामीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उहाँहरुका मागका साथ हाम्रा रायहरु पठायौं । उहाँहरुको माग, चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेरै लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेपनि अहिलेलाई जिल्लाभित्र चल्ने सवारीलाई चल्न दिने निर्णय लियौं । यसमा हाम्रो एउटै उद्देश्य समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत होस् भन्ने हो । हामीले सार्वजनिक सवारी चलाउँदा के–कस्स्ता कस्ता मापदण्ड अपनाउने भनेर पनि तोकेका छौं । अब उहाँहरुकै माग अनुसार क्रमैसँग सार्वजनिक यातायात चल्छ ।
उहाँहरुले शर्त राख्नुभएको हैन, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेर राम्रो ग¥यो भनिरहनुभएको छ । सरकारले आंशिकरुपमा हामीलाई सुन्यो, तर, हाम्रो अरु चाहाना पनि पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ ।
जो सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले म सवारी चलाउँदिन भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय भयो । सरकारले निर्देशन दिएको छैन, चलाउनैपर्छ भनेको हैन । यात्रु आफैंले मास्क लगाउनुपर्छ भनेर हामीले नै नियम बनाएका छौं । चालक सहचालकको लागि हुने खर्च त उहाँहरुले नै गर्नुप¥यो ।
मजदुरहरुको सवाल छ । उहाँहरु पनि फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने हो । यात्रुहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ । त्यसैले उहाँहरुले बीमाको कुरा उठेको छ । यसलाई बेठीक पनि भन्नुभएन । तर, माग राखेर ठूलो आन्दोलन गरेको विषय पनि हैन । विगतमा पनि हामीले यसरी काम गर्नेको सुरक्षाका लागि बीमा लगायतका शुल्कबारे निर्णय लिएकै हौ । यो ठूलो कुरा हैन ।
३–४ महिना थन्किएको सवारीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रा सवारीको चक्कामा खिया लाग्यो भनिरहनुभएको छ । एक्कासी निर्णय भएपछि आजको भोलि नै सवारी चलाउन सकिन्न, अलि अघि नै निर्णय गरेको भए हामी तयारी गथ्र्यौं भन्ने कुुरा छ उहाँहरुको ।
सबै सवारीहरु ठीक हालतमा छैनन् । मर्मत कहिले सकिन्छ त्यही दिनबाट चलाउने भन्ने हो । यहाँ कुनै माग र पूरा गर्नुपर्ने विषय नै छैन । अहिलेसम्म उहाँहरुको चाहाना र आवश्यकता बमोजिमको काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो मात्रै अभिव्यक्त भएको हो ।
उहाँहरुले कमाउन थालेपछि तिर्छौं भन्नुभएको छ । दुई चारवटा किस्ता दुई चार महिना पछि धकेल्निुप¥यो भनिरहनुभएको छ । तत्काल गाडीलाई मर्मत गर्न एक–डेढ लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएहुन्थ्यो भन्नुभएको छ ।
सरकारले यातयातलाई प्राथमिकतामा नै राखेर ५ प्रतिशतको ब्याजमा पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ । यातायातलाई एक वर्षका निम्तिमा पनि पुर्नकर्जा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहनुभएको छ, सरकार त्यो काम गर्दैछ ।
त्यसैले अलिकति अलमल मात्र देखिएको हो । उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ, उहाँहरुले कुरा राख्नुभएको छ । सबै कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । हामीले अन्य निकायमा यसबारे जानकारी गराउने काम गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि तयारी गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक यातायात आधामा मात्रै यात्रु राखेर चलाउने र ५० प्रतिशत भाडा समायोजन गर्ने निर्णय त हामीले गरेका छौं । अरु निर्णयहरु एकैसाथ नआउँदा दुई चार दिन अलमल भएको हो । अहिले चलाउन सक्नेले चलाउनुन्छ, नसक्नेहरु मर्मतको लागि लागिसक्नु भएको छ । ७–८ गतेसम्म सबै गाडी चलिसक्छन् मेरो विश्वास छ ।
अहिलेलाई त्यसरी नै बुझ्नुप¥यो । अहिलेसम्म त जनतालाई गाडी नचढ्दा पनि भएको छैन त ? कोभिड–१९को महामारी भयो, लकडाउन गर्दा जनताले महामारीकाविरुद्ध एक ढिक्का भएर साथ दिनुभयो । अझै पनि हामी लडिरहेका छौं । सबैजना यो महामारीमा पीडित छन् । व्यवसायीलाई परेको मारलाई न्युनीकरण गर्न यातायात क्षेत्रलाई सम्बाधेन गरेका हौं ।
हो, सार्वजनिक सवारी निम्न वर्गका जनताको लागि पनि जरुरी छ । सहुलियत दरमा यात्रा गर्न चाहने र बाध्य भएकालाई पनि सवारी नचल्दा समस्या परेकै छ । सक्नेले त ट्याक्सी चढ्लान् । निजी सवारी हुनेहरु पनि छन् । तर, सार्वजनिक सवारी चढ्ने वर्गलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने पक्षलाई मनन गरेर हामीले यो निर्णय लिएका हौं । यो कार्यान्वयन हुन्छ ।
चालक, सहचालकले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा पनि उहाँहरु आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो प्रहरी राखेर, डण्डा चलाएर जाने विषय हैन । संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सबैले नियमको परिपालना गर्नुपर्छ । यो सबैको लागि आफू आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित राख्ने विषय हो । कसैले हेलचक्र्याइँ गर्न हुन्न ।
मैले उहाँहरुलाई भनिदिएको छु, यो सरकारको निर्देशनात्मक निर्णय हैन । कोभिड–१९ को प्रकोपले धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । हामीले यातायात व्यवसायीलाई परेको समस्या र संक्रमणको जोखिमलाई हेरेरै छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी खोलेका हौं ।
हामी कोभिड–१९को महामारीको संकेतलाई पनि एकतर्फबाट हेरिरहेका छौं । अव केही समयपछि विस्तारै संक्रमणको दर ओरालो लाग्ला । एक दिन त सार्वजनिक सवारी पूर्णरुपमा खुलाउनैपर्छ, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले सवारीमा पनि सुरक्षित तवरले यात्रा गर्ने अभ्यास पनि भइराखोस् भन्ने चाहेका पनि हौं ।
यातायात व्यवसाय पनि तंग्रियोस् भन्ने उद्देश्य हो । आधा मात्रै सिटमा यात्रु चढाउनुस्, जिल्लामा मात्रै चलाउनुस् भन्नुको कारण भनेको कसैलाई पनि मार नपरोस् भनेर हो । (अनलाइनखवर डटकमबाट साभार)